Chekwaa batrị na mobaịlụ. Download Dọkịta Batrị | Site na Linux
Chekwaa batrị na mobaịlụ. Download Dọkịta Batrị
Anyị niile nọ n'ọnọdụ a, na-ahụ ka akara ngosi nke batrị nke ekwentị anyị Ọ na-efegharị n'etiti ụda ịdọ aka ná ntị na-acha odo odo na oku mberede na-acha uhie uhie dị ize ndụ. Nke abụọ anyị na-ahụ agba nke na-egosi ụgwọ ahụ ga-agwụ, anyị na-achọsi ike ịchọta chaja ahụ.
1 Chekwaa batrị na mobaịlụ. Download Dọkịta Batrị
2 Kedu ihe bụ Dọkịta Batrị?
Nwere ike ịhọrọ ịnọgide na-atachi obi ndị a na ụdị oké ọnọdụ, ma ọ bụ i nwere ike ịkwụsị erughị ala kpamkpam na jidere na ngwa. Batrị Dọkịta.
Kedu ihe bụ Dọkịta Batrị?
Dọkịta Batrị bụ ihe dị mfe iji ngwa nke na-eme ka a nyocha zuru ezu banyere ojiji nke batrị nke ekwentị gị. Otu ihe dị oke mkpa bụ na ngwa ahụ na-enye atụmatụ nke ndụ batrị fọdụrụ dabere na ụzọ dị iche iche ị si eji ekwentị gị.
You na-ekiri vidio mgbe niile Youtube? Ngwa a ga - agwa gị oge ị ga - aga n’ihu na - ele vidio ndị ahụ na ọnụego ị gara. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị eji ngwa ọ bụla, Dọkịta batrị Ọ ga - agwa gị ogologo oge ọ fọdụrụ ruo mgbe batrị nwụrụ.
Dọkịta Batrị depụtara aha ole eji arụ ọrụ ugbu a na oge na ume ha ji eme ihe. Ha na-enyekwa gị echiche etu ị ga - esi bulite batrị gị site na ijikwa ntọala.
Nhọrọ na ntọala
Nhọrọ gụnyere deactivation de Wi-Fi ma ọ bụ GPS, nchapụta nchapụta na ike apụ Bluetooth. Dọkịta Batrị ga-agwa gị ogologo oge nhọrọ ndị a ga-agbatị ndụ gị.
Ngwa ahụ na-egosikwa ihe e boro ebubo site na ndekọ ndekọ ya - ugboro ole batrị gafere site na usoro zuru ezu ma ọ bụ nke ele mmadụ anya n'ihu, na ugboro ole. Batrị dọkịta na-ekwu na kwesịrị ka ị na-ana ekwentị gị mgbe ọ bụla ike ya bụ n'okpuru 100% na n'elu 20%.
E wezụga batrị
Ngwa ahụ karịrị ịnye ndụmọdụ na atụmatụ nchekwa batrị dị mfe. Ga-amụtakwa banyere CPU na iji nchekwa, Wi-Fi na ozi nke Ekwentị mkpanaka, usoro nhazi disk na ngwaike nkọwa nke ekwentị. Younwekwara ike ịtọ ncheta na-akwụ ụgwọ, yabụ enwere ngwa ngwa iji chetara gị ka ị jikọọ batrị.
Otu ihe anyị hụrụ n'anya banyere ụdị nke android Ọ bụ wijetị ị nwere ike itinye na ihuenyo ụlọ ekwentị gị. Na ya, ozi batrị niile na nhazi nke gị smartphone ọ dị mfe na ngwa ngwa iji nweta.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị gbasara ịgbatị ndụ nke batrị ekwentị gị, ọ bara uru ileba anya na Dọkịta Batrị, ọ bụ ngwa kachasị mma iji nweta ya.
Ma gị onwe gị, ị na-eche maka batrị ekwentị gị? Cheta na ọ bụ isi ihe iji nọgide na-enwe ahụ ike ka o wee rụọ ọrụ nke ọma ruo ogologo oge o kwere mee. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime anyị, egbula oge ịhapụ ihe ị kwuru na ndụmọdụ gị ịzọpụta batrị na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Chekwaa batrị na mobaịlụ. Download Dọkịta Batrị
Laghachi na distro ọdịnala nke na-abịa site na ntọhapụ na-agbanwe